यी हुन आईपीएल २०२१ मा खेल्न सक्ने ४ विदेशी खेलाडी » Onlycricnepal
यी ४ स्टार खेलाडी : जसले पाएनन् भारतीय टेष्ट टिममा मौका !
भारतीय टेष्ट टिम घोषणा, यी खेलाडीले पाए मौका
डिभिलियर्स अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेटमा फर्किने पक्का !
विराट र अनुष्काले कोरोनापीडितलाई सहयोग गरे ‘मोटो रकम’
नेपाललाई ‘टेष्ट नेशन’ बनाउनेबारे यसो भन्छन् कुशल (भिडियोसहित)
आईपीएल स्थगितपछि रोहितले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
भारतीय टेष्ट टिम घोषणा हुने, यी खेलाडीले पाउनसक्छन् मौका !
आईपीएलका बाँकी खेल इंग्ल्याण्डमा हुन सक्ने
टेष्ट वरियतामा पन्तको छलाङ, खस्किए बाबर
सीपीएल : ट्रिनबागोले गर्‍यो १३ खेलाडी रिटेन, सन्दीपको सम्भावना कति?
यी हुन आईपीएल २०२१ मा खेल्न सक्ने ४ विदेशी खेलाडी
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०८:०५
काठमाडौं, १९ मंसिर : इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १४ औँ सिजन भारतमै हुने सम्भावना छ । आईपीएल विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा लोकप्रिय लिग हो ।
यो प्रतियोगितामा भाग लिने प्रायः सबै क्रिकेटको इच्छा हुन्छ । तर, केही स्टार खेलाडीले भने अहिलेसम्म आईपीएल खेल्न पाएका छैनन् । यसैबीच, आज आगामी सिजनको आईपीएल खेल्न सक्ने चार विदेशी खेलाडीको चर्चा गर्दैछौँ :
डेविड मलान : इंग्ल्याण्डका डेविड हाल आईसीसी टी-२० को ब्याटिङ वरियतामा शीर्ष स्थानमा छन् । आक्रामकरूपमा ब्याटिङ गर्ने उनले इंग्ल्याण्डका लागि १९ टी-२० मा ५३.४३ को शानदार औसतमा १४९.४७ को स्ट्राइक रेटका साथ ८५५ रन बनाएका छन् ।
मलानले इंग्ल्याण्डका लागि टी-२० मा एक शानदार शतक र ९ अर्धशतकसमेत बनाएका छन् । तर, अचम्मको कुरा हालसम्म यी स्टार ब्याट्सम्यानले आईपीएल खेलेका छैनन् । हालसम्म आईपीएलमा नजोडिएका मलान १४ औँ सिजनमा भने खेल्ने सम्भावना छ ।
रस्सीवान्डर दुसेन : दक्षिण अफ्रिकाका यी खेलाडी निरन्तर शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको पछिल्लो सिजनको साम्सी सुपर लिगमा उनले उत्कृष्ट गरेका थिए ।
दुसेनले ग्लोबल टी-२० क्यानाडा लिगमा पाँच खेलमा १६१.२४ को शानदार स्ट्राइक रेटमा २०८ रन बनाएका थिए । उनले दक्षिण अफ्रिकाका लागि १८ म्याचमा ५४२ रन बनाएका छन् ।
केही दिनअघि मात्र दुसेनले इंग्ल्याण्डविरुद्ध ३२ बलमा ५ छक्का र ५ चौका हिर्काउँदै अविजित ७४ रन बनाएका थिए ।
निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका दुसेनले हालसम्म आईपीएल खेल्ने अवसर पाएका छैनन् । हरेक प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने दुसेन आसन्न आईपीएलमा देख्न पाइने सम्भावना बलियो छ ।
ग्लेन फिलिप्स : हालसम्म न्यूजिल्याण्डका यी युवा खेलाडीले आईपीएल खेलेका छैनन् । उनी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
हालै मात्र उनले वेष्ट इण्डिजसँगको टी-२० सिरिजमा ५१ बलमा १० चौका र ८ छक्का हिर्काउँदै १०८ रन बनाएका थिए ।
फिलिप्सले टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा न्यूजिल्याण्डका लागि सर्वाधिक छिटो शतक बनाउने कीर्तिमानसमेत बनाएका छन् ।
२३ वर्षीय फिलिप्स ब्याट्सम्यानका साथै विकेटकीपिङ पनि गर्छन् । हालसम्म उनले विदेशी लिगको रूपमा क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेलेका छन् । जहाँ उनले हरेक सिजनमा शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आसन्न सिजनको आईपीएलमा फिलिप्स खेल्ने सम्भावना छ ।
आईपीएल २०२० मा १० टिम हुने चर्चाले पनि फिलिप्स अक्सनमा सजिल्यै बिक्ने छन् । उनी ओपनिङ ब्याट्सम्यानको भूमिकामा बढी रमाउँछन् ।
मार्क दयाल : यी युवा अलारउन्डर वेष्ट इण्डिजका हुन् । दायलले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
ब्याटिङ/बलिङमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने यी युवा स्टारले हालसम्म आईपीएल खेलेका छैनन् । आगामी आईपीएल संस्करणमा भने उनी अनुबन्ध हुने सम्भावना छ । दयाल बलिङ/ब्याटिङका साथै राम्रो फिल्डिर पनि हुन् ।
इंग्ल्याण्डले पायो बलियो लक्ष्य, पहिलो पारीमा चम्किँए सूर्य र अय्यर
५ चैत्र २०७७, बिहीबार २१:२०
यी हुन् टी–२० क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने बलर
बिराट कोहलीले बनाए अर्धशतक
७ चैत्र २०७७, शनिबार २०:३२
बीबीएलः मेलबर्नलाई झड्का, पाकिस्तान फर्किए हरिस रौफ
३ माघ २०७६, शुक्रबार ०४:५५
Pingback: शिखर धवनले हाशिल गरे नया उपलब्धि, तोडीयो सुरेश रैना सहित यी ३ ब्याट्सम्यानको रेकर्ड » Onlycricnepal
कहिलेबाट सुरु हुन्छन आइपीएलको बाँकी म्याच? अध्यक्ष पटेलले दिए नयाँ अपडेट
२२ बैशाख २०७८, बुधबार १४:११
मनीष पाण्डेका कारण वार्नरले गुमाए ‘कप्तानी’ !
१९ बैशाख २०७८, आईतवार १३:००
आइपिएल : हैदाराबादको लागि वार्नरको यो अन्तिम सिजन !
२० बैशाख २०७८, सोमबार २१:१५
वार्नरलाई हैदराबादले कप्तानबाट हटायो, यी खेलाडीले पाए जिम्मेवारी
१८ बैशाख २०७८, शनिबार १६:२२
टी–२० वरियतामा भारतलाई फाइदा, र्‍याङ्किङबाट हटाइयो पाँच टिम
२० बैशाख २०७८, सोमबार १७:०४
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार २०:१३
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १८:४१
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:१२
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:११
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १३:२७